वर्णन मिडिया बुद्धधर्मका चर्चित अबतारी धर्मगुरु दलाई लामासंगको सनसनीपूर्ण कु्राकानी - वर्णन मिडिया
काठमाडौ । भारतको मोदी सरकारले हालै जम्मू कश्मीर राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशको रुपमा राजनैतिक विभाजन गरेको सम्वन्धमा बुद्धधर्मका शिषस्र्थ अवतारी तिव्वती धर्मगुरु मानिएका दलाई लामाले भारत–पाकिस्तान विभाजनलाई गलत मान्दै आएका छन् । उनलाई भारत र पाकिस्तान दुई अलग देश भएको कुरा आफूलाई पट्टक्कै चित्त नबुझेको बताउँछन । भारत–पाकिस्तान विभाजनलाई दुबै देशका जनताको कठघरामा राख्नु पर्ने भन्दै लामाले ‘भारत सरकारले जम्मू कश्मीर र लद्दाख लाई हालै दुई अलग अलग केन्द्र शासित राज्य बनाउने गरी गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न जटिल मानेका छन् ।
लामा भन्छन् तर पहिले मैले बुझें कि भारत र पाकिस्तानको विभाजन नै गलत भएको छ । गान्धीजी पनि यसको बिरूद्ध थिए ।’ चर्चित दैनिक पत्रिका भास्करका बरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध शर्मालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बुद्धधर्म गुरु लामाले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई वर्तमान दुबै देशबीच कायम प्रतिकुलअवस्थालाई सहजतामा परिणत गर्न आपसमा मिल्नु पर्ने सल्लाह दिए । भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहदै आउनु भएका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको भारतीय दैनिक भाष्कर पत्रिकासंग भएको कुराकानीको सम्पादन गरिएको केही अंश यहाँ नेपालीमा हामीले अनुवाद गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
भास्कर ः लद्दाखका जनता लामो समयदेखि स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै थिए । अब लद्दाख र जम्मू कश्मीर दुई फरक केन्द्र शासित राज्य भएका छन् । तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
लामाः यो एक जटिल प्रश्न हो । मलाई के लाग्छ भने भारत र पाकिस्तानको विभाजन गलत भयो । गान्धीजी आफै यसको विरोधमा थिए । त्यहाँ विभाजनको लागि उचित कारण थिएन । आज जस्तै, १९४७ मा, पाकिस्तान भन्दा भारतमा बढी मुस्लिम थिए । पाक तर्फ रहेको काश्मिर आज कश्मीर भन्दा कम विकसित भएको छ । पाकको अवस्था चिन्ताजनक छ । इमरान खान बोलीमा भावनात्मक भइरहेका छन् । यद्यपि सत्य यो हो कि यदि युद्ध भए पाकिस्तानले भारतलाई हराउन सक्दैन । पाकिस्तानले भारतसँग मैत्री सम्बन्ध राख्यो भने उत्तम हुन्छ । म आफैंमा भारतीय मुसलमानहरुको प्रशंसक हुँ ।
भास्करः पछिल्लो समय तपाईले मोदीलाई कहिले भेट्नुभयो ?
लामाः चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिंगले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा भेट गर्न सक्थे तर भेटिएनन् । वास्तवमा सेप्टेम्बर २०१४ मा, चिनियाँ सम्पर्कहरूले जिनपिंगले पनि मलाई भेट्ने कुरा गरे । मैले यो भारत सरकारलाई भनें । उनले चीनको भारतीय दूतावासलाई सोधे । यो यस्तो कुनै संकेत छैन कि बाहिर बदलियो । मोदी सरकारले पनि कुनै निर्णय गरेन । यसका कारण मैले जिनपिंगलाई भेट्न सकेन । यद्यपि तिब्बतका लागि प्रधानमन्त्रीको समर्थन यथावत छ । मेरो जन्मदिन मा, उनले पनि कल गरी मलाई शुभकामना दिए ।
भास्करः तपाईले भारतका १६ प्रधानमन्त्रीहरू भेट्नु भएको छ, नेहरूदेखि मोदीसम्म, तपाईलाई सबै भन्दा राम्रो लाग्ने को हुन ?
लामाः मैले पहिलो पटक नेहरूसँग १९५४ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित लन्चमा भेटे । प्रधानमन्त्री नेहरूसँग खाजाको लागि आएका मानिसहरूलाई परिचय गराउँदै थिए । जब मेरो पालो आयो, उनले भने, उनी दलाई लामा हुन् । यो सुनेर नेहरू छक्क पर्दै उभिए, न त बोले न हात मिलाए र अघि बढे । यो उनीसँग मेरो पहिलो अनुभव थियो । म उनको कारण मात्र भारतको पाहुना हुँ । लाल बहादुर शास्त्रीलाई भेटे जब उनले चीनसँग कडाईका साथ लड्ने विचार गर्दै थिए । तिब्बतमा भएको विद्रोहको वार्षिकोत्सवमा सन्देश नपठाउन एक पटक इंदिराजीले एक जना दूतलाई पठाएकी थिइन् । जवाफमा मैले भने कि म १९६० देखि सन्देश दिँदै छु, त्यसैले म यो रोक्न सक्दिन । त्यसपछि उनी राजी भइन् । राजीव गान्धी बुद्धिमान थिए । उनको समयमा भारतीय सेनासँग चीन भन्दा राम्रो हतियार थिए । उनले भने कि यदि त्यहाँ ९चीनसँग० समस्या छ भने ऊ चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अटलजीसँग एउटा हास्यास्पद घटना छ । हामी तिब्बतको बारेमा छलफल गर्दै थियौं । अटलजी थकानको साथ कार्यक्रममै निदाए । मैले पाकको नाम लिने बित्तिकै उनी दुबै आँखा खोलेर सतर्क भए । मोदीजी पनि विश्व भ्रमण गर्दै छन् र भारतको नामलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याइरहेका छन् ।
भास्करः यदि भारतले विश्वव्यापी नेतृत्व लिन्छ भने तपाई के भन्नुहुन्छ ?
लामाः म भन्छु कि २१ औं शताब्दीमा भारतले शिक्षाको माध्यमबाट विश्वव्यापी नेतृत्वतिर अग्रसर हुनुपर्दछ । राजनैतिक रुपमा शक्तिशाली हुँदैन ।
भास्करः तपाई ६० बर्षदेखि भारतमा हुनुहुन्छ । के कसैले तपाईलाई फिर्ता जानको लागि सोधेको छ ?
लामाः छैन । प्रायः म मजाकका रूपमा अधिकारीहरूलाई भन्छु कि यदि भारतले मलाई भन्यो कि तपाईं अब हाम्रो पाहुना हुनुहुन्न, म एक संकटको सामना गर्न सक्छु । यस्तो हुँदा सायद मैले स्विजरल्याण्ड जाने बारेमा सोच्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यो भन्दा पहिले मसँग कतै पुग्ने ठाउँ छैन । त्यसबेला उनीहरूले मलाई विश्वास दिलाउँछ कि दलाई लामा सधैं भारत सरकारको अतिथि हुनेछन् ।
भास्करः तपाई किन अब चीन परिवर्तन हुँदैछ भन्दै आउँनु भएको छ ?
लामा ः हो, चीनको सोच र उनीहरूको थिंकट्याङक परिवर्तन हुँदैछ । उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको ७० बर्ष देखि चल्दै आएको बल नीति अब सफल हुने छैन । चीनले अहिलेसम्म भनेको तिब्बती परम्परालाई भारतको नालंदा मान्न थालियो । यस्तो अवस्थामा चीन र भारतबीच मैत्री सम्बन्ध आवश्यक छ । मसँग हरेक हप्ता धर्मशालामा चिनियाँ नागरिक आउँछन् । उनीहरु मेरो अगाडि रुन्छन् ।
भास्करः तपाई आफूलाई भारतीय ठान्नुहुन्छ कि तिब्बती ?
लामाः तिब्बतमा मैले धेरै औपचारिकताहरू पालना गर्नुपर्‍यो । अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । १९५९ मा तिब्बत छुट्यो । म शारीरिक रूपमा भारतीय हुन सक्दिन, तर आधुनिक भारतीय दिमागभन्दा बढी भारतीय हो । म भारतको छोरा हुँ ।
भास्करः के चिनियाँ–तिब्बतीहरूले तपाईंलाई फिर्ता आउन आग्रह गर्छन् ?
लामाः गर्छन नि किन नगर्नु रु चिनियाँ अधिकारीहरूले मलाई फर्केर आउँन आग्रह गर्छन । उनीहरूलाई भन्छु कि म पनि आउन तयार छु । तीर्थयात्रा साइटहरू भ्रमण गर्न, तर म कुनै हतारमा छैन । धेरै चिनियाँहरू पनि भन्छन् कि म भारतमा रहनु पर्छ, यो विश्वमै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र हो । तपाइँमाथि चीनमा प्रतिबन्धित हुनेछ । एक पटक मैले भनें कि भारतका पुलिसहरू मलाई बाह्य खतराहरूबाट जोगाउन सधैं मसँग हुन्छन् । जबकि चिनियाँ प्रहरीले मलाई सुरक्षा भन्दा बढी अनुगमन गर्थे । भारत वास्तवमै स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक देश हो, त्यसैले म भारतलाई चीनको भन्दा धेरै प्राथमिकता दिन्छु ।
भास्करः १४ औं दलाई लामाको वर्तमान उदेश्य के हो ?
लामा स् आधुनिक शिक्षालाई पुरानो भारतीय ज्ञानको साथ जोड्ने जसले दिमागलाई शान्ति प्रदान गर्दछ । शुन्यबाट विश्वविद्यालय तहसम्म, विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक स्वच्छताका साथै भावनात्मक स्वच्छताको बारेमा सिकाउनु पर्छ । दिमाग प्रशिक्षित हुनु पर्छ । ताकि धर्ममा विश्वास गर्ने वा नगर्ने दुबै व्यक्तिले हरेक परिस्थितिमा भावनाहरू नियन्त्रण गर्न सिक्न सक्दछन् । हामी कर्नाटकको तिब्बती बौद्ध विहारको संस्था पुनर्स्थापना गर्दैछौं ।
भास्कर : कसरी तिब्बतबाट एक जना व्यक्ति भारत आए र अचानक यहाँका पाहुना भए ?
लामा : म पहिलो पटक १९५६ मा भारत सरकारको आमन्त्रितमा बौद्ध जयन्ती महोत्सवमा आएको हुँ । मेरा दुई भाइहरू पनि सँगै थिए । उनले भने कि ऊ यहाँ रोकिनु पर्छ । यस समयमा हामीले नेहरूसँग धेरै पटक भेट्यौं । अन्ततः उनको सल्लाहमा हामी ल्हासा फिर्ता भयौं । १९५९ मा हामीले ल्हासा फेरि छोड्नुपर्यो । तब मैले भुटान र भारतमा हामीलाई स्वीकार गर्न सन्देशवाहकहरू पठाएँ । दिल्लीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री कृष्ण माननले भने कि दलाई लामालाई शरण दिँदा चीनसँगको भारतको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । तर नेहरू सबै बाईपास गरेर सन्देश पठाए कि उनी हामीलाई स्वागत गर्न तयार छन् । त्यसबेलादेखि म भारतको अतिथि हुँ ।
भास्करः तपाई क्वान्टम फिजिक्सको हिसाबले दैनिक ध्यान गर्नुहुन्छ । ध्यान गर्ने नयाँ तरिका कुन हो ?
लामा ः हो, म हरेक दिन ध्यानमा क्वान्टम फिजिक्सको स्पष्टीकरण प्रयोग गर्छु । स्पष्टीकरणले भन्छ कि जे दृश्य छ त्यो अवश्य अवस्थित हुँदैन । जब म विश्वका मनोवैज्ञानिकहरूलाई भेट्छु, यस्तो लाग्छ कि उनीहरूको ज्ञान शुन्य स्तरको हो भने भारतीय मनोविज्ञान उच्च स्तरको छ ।
भास्करः अर्को दलाई लामा तिब्बतमा बस्नेछन् । चीनको कारण ऊ कसरी विश्वको सुधारको बारेमा सोच्न सक्छ ?
लामाः थाहा छैन । चाहे दलाई लामा संस्था जारी छ वा छैन, यो तिब्बतीहरूमा निर्भर छ । मैले औपचारिक रुपमा १९६९ मा औपचारीक रुपमा भनेको छु । त्यहाँ एउटा डर छ कि अर्को दलाई लामा छैटौ केटाको रूपमा आउनेछ, र त्यहाँ बौद्ध धर्मलाई ठूलो क्षति हुनेछ । जब मैले मेरो साथीलाई मेरो सपना सुनाए, उसले भन्यो के तिमीले छैठौं दलाई लामालाई याद गर्यौ रु यो सुनेर म स्तब्ध भए । म छैठौ दलाई लामा भन्दा राम्रो छु । त्यसैले व्यवहार र अध्ययन, महत्वपुर्ण हुन्छ संस्था होइन । केहि बकवास लामाहरू पनि त्यहाँ छन् । हिमालयन दायरामा धेरै नामधारी लामा छन्, एकदम मूर्ख छन् ।